तरकारी खेतिमा घर परीवारका सपना बुन्दै धनसरा !! – सुदूर दर्पण
चन्द्र प्रसाद भाट,बैशाख १९ गते,अछाम : पछिल्लो समय अछामका ग्रामिण बस्तिका किसानहरु तरकारी खेतिबाट आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन ।
आफ्नै गाउँमा कृषिकर्म गरेर बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाएर यस क्षेत्रमा लागेका कृषकहरुले तरकारी खेतिबाट आफ्नो जिबिकोपार्जन गर्नुका साथै सम्पूर्ण घरखर्च समेत यसबाट जुटाईरहेका छन ।
त्यसको एक उदाहरण हुन,कमलबजार नगरपालिका वडा नः ६ हात्तिबाँझ कि धनसरा शाही । धनसराले गतबर्ष देखि आफुले तरकारी खेति सुरु गरेको बताउनुभएको छ ।
कृषिज्ञान केन्द्र अछामबाट तालीम लिई कृषि बिज्ञहरुको सुझाव अनुसार नै उनले अहिले हात्तिबाँझमा टमाटर खेति गरीरहनुभएको छ ।
आफुले तरकारी खेति सुरु गरेदेखि आफुले बजारबाट तरकारी किनेर खानु नपरेको बताउँनुहुँदै उहाँले अहिले आफुले सबै घरखर्च टमाटर खेतीबाटै धान्ने गरेको सुनाउनुभयो ।
तर बिडम्बना,आफ्नै ठाउँमा कृषि कर्म गरीरहेकी धनसरालाई अहिले सम्म वडा तथा नगर सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन । स्थानिय सरकारले आफुजस्ता किसानहरुलाई केहि मात्रामा भएपनि सहयोग गरीदिएको भए अझै सहज हुने उनको भनाई छ ।
आफुले मत दिएर निर्बाचित गराएका जनप्रतिनिधिहरु भन्दा कृषि ज्ञानकेन्द्र नै आफ्नो लागी साहारा बनेको धनसराको भनाई छ ।
कृषि संकलन केन्द्रबाट आफुले नियमित रुपमा बिउबिजनका साथै आवश्यक सुझाव सल्लाह पाईरहेको उहाँले बताउनुभएको छ । खुर्सानीको खेति समेत गर्नुभएकि धनसराले अहिले आफु एक्लैले तरकारी खेतिको हेरचाह गरीरहेको बताउनुभयो ।
धनसराले भाबुक हुँदै भनिन् । मेरा श्रीमान कमजोर हुनुहुन्छ,उहाँ काम गर्न सक्नुहुन्न । मैले एक्लैले यो सबै काम धाईरहेकी छुँ । अझै पनि म मा कृषिकर्म गर्ने ईच्छाक्ति हराएको छैन । कुनै पनि काममा ईच्छाशक्ति भयो भने असम्भब भन्ने कुरा केहि नहुँने भन्दै उहाँले आफ्नै ठाउँमा केहि गर्ने उदेश्यका साथ परीश्रम गर्न सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।
आफुले लाई अहिले कृषि संकलन केन्द्रबाट तरकारीका लागी बिउबिजनहरु उपलब्ध भैरहेको बताउँदै उनले आफैले तरकारीका बुटाहरु उमार्ने गरेको सुनाईन् ।
टमाटर खेतिमा लाग्ने रोगहरुलाई नियन्त्रणका लागी पनि आफैले काम गर्दै आएको समेत उनको भनाई छ । कृषि संकलन केन्द्रबाट बिषादी समेत उपलब्ध भैरहेकाले आफुलाई सहज भएको उहाँको भनाई छ ।
तरकारी खेति गरेर मात्र नहुँने भन्दै शाहीले त्यसको हेरचाहका लागी पनि ध्यान दिनुपर्ने बताईन् । कुन बेला पानीको आवश्कता पदर्छ ? कुन समयमा मल चाहिन्छ? कुन समय बिषादी चाहिन्छ ? यि विविध कुराहरुमा ध्इान दिन सक्यो भने तरकारी खेति आफुले सोचेजस्तो हुने उनको भनाई छ ।
तर यस्ता कृषकहरुलाई स्थानिय सरकारले कुनैपनि सहयोग नगर्नु लज्जास्पद कुरा हो । आफ्नो ठाउँमा केहि नगर्ने भन्दै आरोप लगाउने जनप्रतिनिधिहरु कृषिकर्म गर्ने कृषकहरुलाई सहुलिएत दिन किन कन्जुस्याँई गरीरहेका छन ? यो प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । गाउँमै कृर्षिमा क्रान्ति गर्ने नागरीकहरु लाई सहुलिएत दिनका लागी स्थानिय सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्याओस ।
अछाममा जिल्लामा जेष्ठ २ गतेसम्म लकडाउन (आदेश सहित)
अछाम अस्पतालमा थप एक जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गयो